गीतहरु बदली-बदली गाउनेछन् ! अब औषधी र भेन्टिलेटरका गीतहरु आउनेछन् -: स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल – Namaste Dainik
August 11, 2020 August 11, 2020 NamastedainikLeaveaComment on गीतहरु बदली-बदली गाउनेछन् ! अब औषधी र भेन्टिलेटरका गीतहरु आउनेछन् -: स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल
२७ साउन, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भारतसँगको सम्बन्ध देवीदेउवताकै पालादेखिको भएकाले त्यहाँ कोराना समाप्त नहुँदासम्म नेपालमा समाप्त हुन गाह्रै पर्ने बताएका छन् । कोरोनाको जोखिम बढेका बेला सभा-सम्मेलनहरु गर्न नपाइने सरकारी घोषणा विपरीत मंगलबार परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालले ६१ औं वाषिर्कोत्सव कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । र, सो कार्यक्रममा आफैं नीति बनाउने मन्त्री ढकाल प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित भएका थिए ।
भारतमा अहिले संक्रमण बढिरहेको बताउँदै मन्त्री ढकालले अगाडि भने, ‘हामीले मात्रै नियन्त्रण गरेर यो काबुमा ल्याउँछौं भन्ने कुरो भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्दै त्यो खतराबाट पनि कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर शिक्षा लिएर सावधानीपूर्वक काम गर्ने कुरामा नै हामी जुटिराखेका छौं ।’कोरोनाको जोखिमबारे नेपाल सरकारले के-कस्तो विश्लेषण गरिरहेको छ ? यसको रोकथामका लागि के-कस्ता नीतिहरु लिइएका छन् ? सरकारले खास काम के गरिरहेको छ ?
यो कोभिड-१९ को महामारीसँग सम्बन्धित विषय अहिलेको राज्यको एउटा प्रमुख र मुख्य विषय छ । हामीले जेठ २५ गते हाम्रा विज्ञहरु राखेर अध्ययन-अनुसन्धान गर्दाखेरि उहाँहरुले के निश्कर्ष निकाल्नुभएको थियो भने पहिले बढेको रफ्तारमा नै हामीले यो रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने साउन २५ देखि भाद्र २ गतेसम्म यो उच्च जोखिमको अवधि रहन सक्छ ।
तपाईहरुलाई थाहा होला, अरु विदेशमा पनि कैयौं नेताहरुको यो रोगबाट मृत्यु पनि भएको छ । कैयौं आक्रान्त भएका छन् । हाम्रै देशमा कुरा गर्ने हो भने पनि माननीय सांसदज्यूहरु समेत संक्रमित भइसक्नुभएको छ । प्रदेशका केही मन्त्रीज्यूहरु पनि संक्रमित हुनुभएको छ । मेयरसाबहरु पनि संक्रमित हुनुभएको छ । सुरक्षा निकायभित्रको कुरा गर्ने हो भने संक्रमणको एउटा ठूलो हिस्सा सेवा गरेवापत संक्रमित भएको छ । नेताहरुको अगसवाइ पछुवाइ गर्ने, सुरक्षाको जिम्मा लिने मित्रहरु पनि संक्रमणको दायरामा हुनुहन्छ भने तपाई आफैं पनि त्यति सुरक्षित हुनुहुन्न । त्यसले गर्दा यो रोगलाई ख्याल ख्याल नठानौं । आइ नै सक्यो ।
मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयका समृद्धिका नीति र योजनाहरु सरकारले बनाएको दाबी गर्दै कोरोना महामारीका कारण त्यसलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका ‘योजना’ मन्त्रीकै शब्दमा सुनौं-
स्वाथ्य क्षेत्रमा अलि नयाँ ढंगले परिवर्तन गरौं । साँच्चै जनताको स्वास्थ्यको सरोकार राज्यले लिन्छ । र, विरामी भएको कारणले उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्‍यो भन्ने चिन्ताले नै विरामीहरु मर्नुपर्ने स्थिति नहोस् भन्नका निम्ति सोचेर हामीले केही नीतिगत रुपमा पनि केही कार्यक्रमहरु यो वर्षबाट नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नलाई नीति कार्यक्रममा ल्यायौं ।
तर, त्यो कार्यक्रम अहिले हामीले लागू गरिहाल्नेखालको अवस्थामा पुग्न भ्याएका छैनौं । किनभने यो नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि पनि कोभिड आइसकेकै थियो । महामारीका विरुद्ध अहिले संसार नै रक्षात्मक अवस्थाबाट लडाइँ लडिराखेका कारणले दैनिक र समृद्धिको यात्रालाई हामीले व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।
मैले यो प्रशंग यहाँहरुका वीचमा यो बहुत पवित्र कार्यका दिन किन स्मरण गराइराखेको छु भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेतिथि गरेर हुर्किएकाहरु र बेथितिभन्दा माथि नउठोस् भन्ने मान्छेहरुका लागि अहिले के लाग्न थालेको छ भने जो आए पनि उस्तै हो भन्ने कुरालाई नै यथार्थतामा परिणत गर्न सकिएला कि भनेर महामारीको सिरानी हालेर आनन्द मान्नुभएको छ भने यो पलपलमा हेक्का गरेर नै म बसेको छु र त्यो स्थिति आउन नदिने प्रतिवद्धता पनि मैले लिएकै छु ।
कतिपय मान्छेलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सुधि्रएला कि भन्ने चिन्ता छ । किनभने, बेथिति भइरह्यो भनेदेखि बेथितिभित्रै रमाउन चाहनेहरु त्यसैलाई नै स्वर्ग मानेर बसिराखेका छन् । तर, हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रमहरु यसचोटि परिमार्जित ढंगले ल्याएका छौं ।
महामारीको वर्ष भएको हुनाले हामीले केन्द्रमा ३०० बेडसँग सम्बन्धित महामारीको अस्पताल बनाउने, ल्याबसहितको । प्रत्येक प्रदेशमा ५० बेडभन्दा माथिको सरुवा रोगसँग सम्बन्धित उपचार, सेवा र ट्रेनिङ दिने गरी ल्याबसहितको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौं । हिजोका अञ्चल अस्पतालहरुलाई २०० बेडमा स्तर वृद्धि गर्ने, संघका अस्पतालहरुलाई ५०० बेडको स्तर वृद्धि गरेर सेवा पनि त्यही ढंगले प्रवाह गर्ने ।
यसका अतिरिक्त, सेवाग्राहीहरु, जो विपन्न र आधारभूत तहभन्दा तल रहेका व्यक्तिहरुको उपचारका निम्ति केन्द्रमा केही अस्पतालहरु र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा अस्पताल तोकेर निशुल्क सेवा सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु पनि हामीले ल्याएकै छौं । मलाई लाग्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएका संरचनागत संरचनामा पनि केही परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ती कार्यक्रमहरु ल्याएका छौं । तर, महामारीको कारणले गर्दा ती कार्यक्रमहरु धेरै सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्न पाएका छैनौं । किनभने, जता फर्किए पनि कोरोनाकै त्रासबाट त्यसकै व्यवस्थापनको कार्यमा नै हामी लागिराख्नुपरेको छ ।
तर, यसको अर्थ यो कोरोनासँगै स्वास्थ्यको जीवन समाप्त हुन्छ भन्ने हिसाबले सोच्नु हुँदैन, सोचेका पनि छैनौं भन्ने म ठान्दछु । हामी अब ती कार्यक्रमहरु लाई पनि प्रभावकारी ढंगले नै अगाडि बढाउने खालको सोचाइमा छौं ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको हिसाबले एउटा फिल्डको योद्धाको हिसाबले म यहाँहरुसँग यी अप्ठ्याराहरुका बावजुद पनि यसलाई सकुशल अवतरण गर्नेगरी काम गर्ने कुरामा तपाईहरुको सहयोग रचनात्मक, सहयोगात्मक रहने नै छ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु ।